‘द भ्वाइस अफ नेपाल’का निर्णायक खरेलले कान समातेर मागे माफी ! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘द भ्वाइस अफ नेपाल’का निर्णायक खरेलले कान समातेर मागे माफी !
September 18, 2018 Tulasa Karki Entertainment, Event 0
चर्चित रियालिटी शो ‘टिभिएस अपाचे ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ कार्यक्रममा निर्णायक प्रमोद खरेलले गायिका अभया सुब्बासँग माफी मागेका छन् ।
अभया सुब्बाले आफ्नो टिममा लिन ठिक्क परेको प्रतियोगी सुदामा गौतमलाई गायक खरेलले आफ्नो पक्षमा लोभ्याएर लगेपछि‘टिभिएस अपाचे ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ कार्यक्रमकै बिचमा आइतवार कान समातेर खरेलले माफी माग्नु परेको हो ।
त्यो बिचमा दुई निर्णायकबिच वादविवाद भइरहेको थियो भने अभयाले प्रमोदलाई आफूले मन पराएको प्रतियोगीलाई किन फर्किएको भनेर प्रश्न गरेकी थिईन् ।
‘टिभिएस अपाचे ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ कार्यक्रमका दुबै निर्णायकले प्रतियोगीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न निकै प्रयास गरेका थिए र त्यसबिचमा गायक खरेल र गायिका सुब्बाबिच जुहारी चलेको थियो । खरेलले निकै प्रभाव पार्दै सुदामालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए ।
गायिका सुब्बाले आफ्नो टिममा नआएपछि प्रतियोगी सुदामालाई प्रमोदलाई नै फेरी गरेर अंगालो हाल्न भनेकी थिईन् ।
त्यसपछि गायक खरेलसँग निकै रिसाएकी गायिका सुब्बाले अंग्रेजीमा तिमिले घुम्न हुँदैन थियो भनेपछि उनले कान समातेर नै ‘सरी, सरी’ भनेका थिए ।
हाल चलिरहेको ब्लाइण्ड अडिसनबाट कुल ४८ जना ब्याटल राउण्डमा प्रवेश गर्नेछन जसमा प्रतियोगीहरुले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
अहिले चलिरहेको ब्लाइण्ड अडिसनबाट दिप श्रेष्ठ, सनुप पौडेल, अभया सुब्बा र प्रमोद खरेल मध्ये कसको टिम ससक्त र उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने थाहा पाउन अझै केहि कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्मकै भव्य र रोमान्चक कार्यक्रमको रुपमा संचालन भईरहेको टिभिएस अपाचे ‘द भ्वाइस अफ नेपालले नेपाली गित संगितको क्षेत्रमा नयाँ आयाम कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ । टिभिएस अपाचे सिरिज आरटिआर ‘द भ्वाइस अफ नेपाललाई टिभिएस अपाचेले मुख्य प्रायोजन गरेको छ ।